Shakti: ikozvino nekuenderana kweArduino kune ako epamberi mapurojekiti | Linux Vakapindwa muropa
A kanguva yapfuura Ndatokuudza nezve iyi inonakidza Indian chirongwa, Shakti, kuvaka akateedzana eCPUs akavakirwa pane ISA RISC-V. Ndokureva, iyo inozivikanwa yakavhurika-sosi ISA iri kupa zvakanyanya kutaura nezvazvino, kunyanya mushure mekutengwa kweArm neNVIDIA uye nevazhinji mhedzisiro inogona kuunza.
Zvakanaka, chirongwa ichi chinoramba chichienderera mberi uye mamwe emhando dzemhando dzakateedzana dzinogona kuve dzinonakidza kune mamwe matunhu. Sezvinoratidzwa mu zviri pamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti, ivo vakatarisana nebasa ravo pane akati wandei akateedzana anovavarira kune akasiyana musika zvinangwa.
kubudikidza ejemplo, une here:
Kirasi E: yeakadzikwa, iine matatu-nhanho pombi zvakarongeka.
Kirasi C: ma microcontroller epakati-epakati ebasa rekuremerwa, aine mashanu matanho uye chiteshi zvakarongeka uye MMU. Yaizoenda kubva ku5Mhz kuenda ku500Ghz.
Kirasi I: yezvigadzirwa zvekuita pamwe nekunze-kwe-kuuraya kuuraya uye kuverenga kwakawanda. Iyo ine ine hukasha kusvetuka kwekufungidzira uye mamwe mapaipi matanho kupfuura ayo apfuura. Iyo inosvika kumatanho kubva ku1.5 kusvika ku2.5 Ghz.
Kirasi M: yeiyo nharembozha chikamu, chine anosvika masere macores.
Zvidzidzo: kune nzvimbo dzekushandira uye masevhisi ebhizinesi. Ivo vanogona kutsigira anosvika makumi matatu nemaviri uye MP rutsigiro.
Kirasi H: yeSoC yakagadzirirwa kurwisa kwepamusoro-soro. Iyo kirasi yeHPC, ichikwanisa kusvika pamakumi masere nemazana matanhatu.
Kirasi T: processor yekuyedza, musiyano weC-Kirasi yakagadzirirwa chengetedzo.
Kirasi f: imwe mhosva inoshivirira vhezheni iyo inosanganisira mamwe maitiro ekudzikunura, ECC, uye mamwe mabasa kune mamwe maitiro akakosha.
Zvakanaka, kusvika pano zvese zvinonakidza, asi zvakatonyanya kana iwe ukaona ichi chimwe Tweet ichangobva kutumirwa:
Makorokoto kuchikwata chiri pa SHAKTI @ShaktiProcessor (yemahara uye yakavhurwa sosi) neyakavhurwa yako yechitatu 3rd silicon kubudirira izvozvi neyako #Arduino enderana #mushik SHAKTI E-Kirasi RISC-V musimboti #SoC purojekiti https://t.co/imDLpHtsCG pic.twitter.com/aXRgd25jHp
- Ini ndinonzi (@dez_blanchfield) October 4, 2020
Sezvauri kuona, ikozvino zvakare ne kuenderana kweArduino, chinova kushamisika kunofadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Shakti: ikozvino nekuenderana kweArduino
GIMP 2.10.22 inosvika pamwe nekuvandudza mukutsigira HEIF uye zvimwe zvinhu zvitsva